Nlele Coronavirus n'ogbe |Ọgwụ nke mmetọ ahụ na ngwa ngwa ule Hormone - Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd.
Lelee ebe a ka ịlele
Tọrọ ntọala na 2015 na ịchụso "na-eje ozi ọha mmadụ, ahụike ụwa"na-elekwasị anya na R & D , mmepụta , mmepe , ahịa na ọrụ nke In Vitro diagnostic ngwaahịa na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ngwaahịa.
Ịmepụta na ịmụta isi teknụzụ ọhụrụ maka akụrụngwa na ịdabere na afọ nke itinye ego R&D na-aga n'ihu na nhazi ezi uche dị na ya, testsea arụpụtala ikpo okwu nchọpụta immunological, usoro nchọpụta ihe ọmụmụ ihe omimi, ikpo okwu nyocha isi akwụkwọ protein, na akụrụngwa akụrụngwa.
Dabere na n'elu technology nyiwe, Testsea ka mepụtara ngwaahịa ahịrị ka ngwa ngwa njirimara nke corona virus ọrịa, obi ọrịa, mbufụt, akpụ, ọrịa na-efe efe, ọgwụ ọjọọ eme ihe, ime, wdg Anyị ngwaahịa na-ọtụtụ-eji na ngwa ngwa nchoputa na irè. nlekota nlekota nke ọrịa siri ike na nke siri ike, nchọpụta ahụike ahụike nke nne na ụmụaka, nyocha mmanya na mpaghara ndị ọzọ na ahịa ekpuchiwo ihe karịrị 100 mba na mpaghara gburugburu ụwa.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd.
Ụlọ ọrụ teknụzụ biomedical na-elekwasị anya na ngwaahịa nyocha ahụike in vitro.
Sistemụ nrụpụta R&D emechaala
Ụlọ ọrụ ugbu a nwere nchịkọta R & D zuru ezu, ngwá ọrụ mmepụta na ịdị ọcha
ogbako maka akụrụngwa diagnostic in vitro I reagents I akụrụngwa maka POCT, biochemistry, immunity na molecular nchoputa.
Ike mmepụta kwa afọ
IVD reagent mmepụta isi
Platform nnwale Ọha
Bachelor degree ma ọ bụ karịa
Na 2015, hangzhou testsea biotechnology co., Ltd e guzobere site nchoputa nke ụlọ ọrụ na ọkachamara otu si Chinese Academy of Sciences na Zhejiang University.
2019Njem n'ahịa mba ụwa
N'afọ 2019, guzobe otu ndị na-ere ahịa azụmaahịa mba ofesi iji zụlite ahịa mba ofesi
Mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe teknụzụ gasịrị, wepụta ngwaahịa dị iche iche na-asọmpi, dị ka ngwa nyocha clenbuterol, nyocha nyocha nke Swin.
2020Onye ndu na-emecha nyocha, mmepe, mmepụta na ire nke nchọpụta Sars-Cov-2
Site na ntiwapụ nke ọrịa corona na njedebe nke afọ 2019, ụlọ ọrụ anyị na onye gụrụ akwụkwọ nke Chinese Academy of Sciences mere ngwa ngwa ma malite ule COVID-19, ma nweta asambodo ire ere n'efu na nnabata ọtụtụ mba, mee ka njikwa COVID-19 dị ngwa. .
2021Nkwado ndebanye aha nnwale Covid-19 antigen sitere n'ọtụtụ mba
TESTSEALABS Ngwaahịa antigen COVID-19 nwetara asambodo EU CE, Ndepụta German PEI&BfArm, Australia TGA, UK MHRA, Thailand FDA, ect
Gaa na ụlọ ọrụ ọhụrụ-56000㎡
Iji na-egbo ụlọ ọrụ na-abawanye mmepụta ikike mkpa, ọhụrụ ụlọ ọrụ na 56000㎡ e dechara, mgbe kwa afọ mmepụta ike abawanyela ọtụtụ narị ugboro.
2022Enwetara mkpokọta ahịa ihe karịrị otu ijeri
Otu ịrụ ọrụ nke ọma imekọ ihe ọnụ , nweta mbụ 1 ijeri ahịa uru.
Na ike otu imekọ ihe ọnụ ike na-adịghị akwụsị akwụsị mgbalị , Testsea enweela ihe karịrị 50 ikike patent, 30+ debara aha na esenidụt mba.
Ndebanye aha Georgia
Asambodo TGA Australia
Asambodo CE 1011
CE 1434 Asambodo
United Kingdom MHRA
Asambodo FDA nke Philippine
Asambodo FDA nke Thailand
Ndebanye aha Czech
Site n'ọhụụ nke "Serving Society, Healthy World", anyị na-agba mbọ inye aka na ahụike mmadụ site n'inye ngwaahịa nyocha dị mma na ịkwalite nyocha ziri ezi nke ọrịa maka mmadụ niile.
"Iguzosi ike n'ezi ihe, ịdị mma na ọrụ" bụ nkà ihe ọmụma anyị na-achụso, na Testsea na-agbalịsi ike ịzụlite n'ime ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ọhụrụ, na-elekọta ndị mmadụ na gburugburu ebe obibi, na-eme ka ndị ọrụ ya dị mpako ma nweta ntụkwasị obi ogologo oge nke onye òtù ọlụlụ ya.
Ngwa ngwa, ngwa ngwa, mmetụta na nke ziri ezi, Testsea Biologicals nọ ebe a iji nyere gị aka na nyocha nyocha gị.
Ihe ohuru maka Teknụzụ Ọhụrụ
Testsea na-ama mmepe teknụzụ ọhụrụ aka na mbọ ọhụrụ iji nweta ohere niile.Anyị na-eme nchọpụta mgbe niile ma na-emepụta ngwaahịa ndị dị irè karị, na-enwe echiche efu na nke okike, na omenala nhazi ngwa ngwa na mgbanwe iji nabata ha.
Buru ụzọ chee mmadụ
Ngwaahịa ọhụrụ sitere na Testsea na-amalite site na mgba iji mee ka ndụ ndị mmadụ dịkwuo mma ma na-abawanye ụba.Ndị mmadụ n'ọtụtụ mba na-echegbu onwe ha maka ngwaahịa ndị ha kacha mkpa ma na-agba mbọ na mmepụta ngwaahịa ga-abara ndụ ha uru.
Ọrụ dị n'aka Society
Testsea nwere ọrụ mmekọrịta ọha na eze imepụta ngwaahịa dị elu nke na-enyere ndị mmadụ na anụmanụ aka ibi ndụ ahụike site na nyocha mmalite.Anyị ga-anọgide na-etinye onwe anyị site na mgbalị na-aga n'ihu iji nyeghachi ndị na-etinye ego nkwụghachi azụ.